Domperidone Injection - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Ukusebenza Manual of Domperidone Injection Veterinary 【Igama Veterinary Izidakamizwa】 【Common Igama】: Injection Domperidone 【English Igama】: Injection Domperidone 【Igama e-Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major Isithako】: Domperidone 【Incazelo】: Lo mkhiqizo Ayinambala ketshezi 【kwemithi Action】: kuyinto omelene Dopamine yokwamukela; Domperidone ungayeka Dopamine kusukela Ukulawula senhlanzi ukukhululwa GTH kanye nge-ovulation kanye ukuqinisa LHRH-A2 futhi sGnRH-A ntombazane GT ...
Ukusebenza Manual of Domperidone Injection
【English Igama】: Injection Domperidone
【Igama e-Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye
【Major Isithako】: Domperidone
【Incazelo】: Lo mkhiqizo Ayinambala ketshezi
【Kwemithi Action】: Kuyinto omelene Dopamine yokwamukela; Domperidone ungayeka Dopamine kusukela Ukulawula senhlanzi ukukhululwa GTH kanye nge-ovulation kanye ukuqinisa LHRH-A 2 futhi sGnRH-A ntombazane GTH ukukhulula kanye nge-ovulation.
【Izinkomba】: Singasho ngokuhlanganyela ukusetshenziswa ne LHRH-A 2 ngoba lokungeniswa yokufakelwa of empathema kanye nge-ovulation ngoba inhlanzi
【Ukusetshenziswa Isikali】: Okokuqala, hlambulula lo mkhiqizo nge lemali ofanele nosawoti evamile kuze zonke ngemililitha yamanzi iqukethe 5 ~ 10mg domperidone. Okwesibili, uhlanganise LHRH-A 2 ngoba umjovo nabanye nosawoti evamile ukuthola LHRH-A 2 isixazululo nge lokuhlushwa 5 ~ 20μg / ml. Lungisa Isikali edingekayo futhi uhlanganise okungenhla izixazululo ezimbili. Khona-ke, ukusebenzisa ingxube umjovo intraperitoneal (kumila pectoral fin) noma ujove esicutshini (eduze kwalapho kumila amaphiko fin). Isilinganiso esithathwa izinhlanzi zesifazane amakhilogramu ingendlela elandelayo:
carp, carp crucian utshani carp chub, bighead dace bream clarias fuscus Loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
Black carp idinga ngemijovo emibili. Umthamo umjovo wokuqala: DOM 5mg + LHRH-A 2 5μg; umjovo yesibili kunikezwa kamuva 24 ~ 48 amahora nge umthamo DOM 5mg + LHRH-A 2 10μg.
inhlanzi umzali Owesilisa kudingeka kuphela 1/2 of isilinganiso esithathwa izinhlanzi umzali ngenhla zesifazane
【Esibi Izidakamizwa Reaction】 Ayikho izidakamizwa ukusabela itholakala uma umthamo Kunconywa kulandelwa.
【Izindaba Udinga Ukunakwa】:
1. Umzali izinhlanzi usebenzisa lo mkhiqizo asivunyelwe ukudla abantu
2. Kungaba ukuqinisekisa ngempumelelo kangcono ezingeni lokushisa lamanzi lika 20 ~ 30 ℃. Uma izinga lokushisa lamanzi ingaphansi kuka-20 ℃, imiphumela zidala lokungeniswa uzobe kancane kuthinteke.
3. Isikali Ngokweqile okusezingeni eliphezulu kungaholela ukukhiqizwa kwamaqanda ekuseni futhi sizothinta okuzala yayo ingamaphesenti.
4. Kungcono nokulungisa izidakamizwa ngaphambi kokuwusebenzisa. Umuthi ukulungele kufanele injected ngaphakathi 0.5-1 ihora.
Previous: Compound S-GnRHa Ukuze Injection (Ovuhom)
Olandelayo: LHRH-A2 ngoba Injection Fish ukusetshenziswa
Trout Amapulazi hormone Ukuze Fish Breeding Ovaprim, Thuthukisa zidala Ovaprim